အမွှေးအကြိုင်ဟောင်း: မှသံသယဝင်သောအခါစကားမပြောနှင့် Martech Zone
အမွှေးအကြိုင်ဟောင်းများ: သံသယ၌ကျင်လည်, စကားမပြောနိုင်သော Go
ဗုဒ္ဓဟူးနေ့, ဇူလိုင်လ 14, 2010 စနေနေ့, အောက်တိုဘာလ 18, 2014 Douglas Karr
တစ်ခါတစ်ရံကျွန်ုပ်သည်စျေးကွက်ရှာဖွေခြင်းနှင့်စီးပွားရေးလုပ်ငန်းတစ်ခု၏အမြင်ကိုပြောင်းလဲခြင်း၊ ကုန်အမှတ်တံဆိပ်၏လက်ခံမှုကိုတိုးမြှင့်ခြင်း၊ ကုမ္ပဏီ၏အောင်မြင်မှုကိုမြင့်တက်စေသည့်ရေရှည်မဟာဗျူဟာများချမှတ်ခြင်းကိုနှစ်သက်သည်။ ဒီနေ့သူတို့ထဲကတစ်ခုမဟုတ်ပါဘူး။
အွန်လိုင်းစျေးကွက်ကမ္ဘာသည်မီးလောင်ကျွမ်းသွားသည် ဉာဏ်ရွှင်သော မဟာဗျူဟာ အမွှေးအကြိုင်ကောင်လေး.
အကယ်၍ သင်သည်မကြားဖူးသူအနည်းငယ်ထဲမှတစ်ယောက်ဖြစ်ပါက Old Spice ကောင်လေးသည် Tweets ကိုသူ၏ Youtube channel မှတစ်ဆင့်အဖြေရှာရန်ခဲယဉ်းသည်။ သူသည်အောက်ပါအခြေအနေနည်းသောသူများကို (ကြီးမားသောနောက်လိုက်များ) အထိကြီးမားသောနောက်လိုက်များနှင့်လူများအားတုံ့ပြန်နေသည်။
ကျွန်ုပ်တို့သည်အမှန်တကယ်ပင်တိမ်မြုပ်ပြီးစကားမပြောနိုင်သလော။ လှပသောစူးရှသောအသံလေးများရှိသောလှပသောကောင်လေးတစ် ဦး ကို ၀ တ်ထားကာသူ့ကိုနွေးထွေးစွာပြန်လာစေကာကမ္ဘာကြီးသည်စင်ကြယ်သောပါရမီဟုရှုမြင်သည်။ ဒီမူရင်းလား ဒါကရိုးရိုးလေးမဟုတ်ဘူး Daddy Boob လှုပ်ရှားမှုများကိုလုပ်ပါ ပြန်လည်တီထွင်ခဲ့သလား တကယ်ပဲလား ထို အံ့သြစရာလား
ဆယ့်နှစ်ည လိင်နှင့်မြို့တော်လား ဘီယာလုပ်ငန်း၌ဖားများလား ဖေဖေ Boobs လား အမွှေးအကြိုင်ကောင်လေးလား ဒီတစ်ခါလည်းငါတို့အားလုံးဟာဒီလောက်ရှုပ်ထွေးတဲ့စမတ်ဖြစ်ဖို့ကြိုးစားရင်းစကားမပြောဘဲနေသင့်တာလည်းဖြစ်နိုင်တယ်။
PS ။ ငါဒီကြော်ငြာတွေကိုကြိုက်တယ်။ သို့သော်ကျွန်ုပ်အနေဖြင့်ကျွန်ုပ်အဖေသည် ၇၀ ပြည့်လွန်နှစ်များတွင်စတော့ရှယ်ယာကုန်ပစ္စည်းများအဖြစ်ရရှိလာသည့် အချိန်မှစ၍ Old Spice ကိုမအနံ့မခံသောကြောင့်ဖြစ်သည်။ ငါသူအစဉ်အဆက်အသုံးပြုခဲ့သည်မထင်ပါဘူး ဒါဟာမေးခွန်းအသနားခံ "ဒီစည်းရုံးလှုံ့ဆော်ရေးဟာ Old Spice ကိုပိုပြီးရောင်းသလား။"
15:2010 pm တွင်ဇူလိုင်လ 7, 52
ဒီကမ်ပိန်းကို ကြိုက်တယ်။ Old Spice Guy နဲ့ Alyssa Milano တို့ကြားက အပြန်ပြန်အလှန်လှန် လိုက်ကြည့်ဖူးလား။ Alyssa သည် သူမ၏ နှင်းဆီပန်းတစ်ဒါဇင်ကို ပေးပို့ပြီးနောက် ရေနံယိုဖိတ်မှု ကယ်ဆယ်ရေးရန်ပုံငွေသို့ ဒေါ်လာ ၁၀၀၀၀၀ ပေးပို့ရန် Old Spice Guy ထံ တောင်းဆိုသည့် ၎င်း၏ကိုယ်ပိုင်ဗီဒီယိုကို ရိုက်ကူးခဲ့သည်။
သူမ၏ အကြောင်းပြန်သည် http://www.alyssa.com/
15:2010 pm တွင်ဇူလိုင်လ 8, 14
ပက်ထရစ်ကိုလည်း ချစ်ကြောင်း ဝန်ခံပါတယ်။ ဒါလည်း ငါ့အချက်ပဲ၊ ကျွန်ုပ်တို့၏ ခေတ်မီဆန်းပြားသော ပစ်မှတ်များနှင့် ယိုယွင်းနေသော ကမ်ပိန်းများအားလုံးကို စွန့်လွှတ်ပြီး ရယ်စရာကောင်းသော စာကြောင်းအချို့ကို ရိုးရှင်းစွာရေးပြီး ကျွန်ုပ်တို့၏စျေးကွက်ရှာဖွေရေးလုပ်ဆောင်ရန် တစ်စုံတစ်ဦးအား အသားအရည်ကို ပြသသင့်ပါသလား။
15:2010 pm တွင်ဇူလိုင်လ 8, 20
ငါက ယောက်ျားလေးမို့ အသားအရည်က ငါ့အတွက် ဘာမှမဖြစ်ဘူးဆိုတာ သိသာပါတယ်။ အဲဒီအစား၊ အဲဒါက သူတို့ပေးတဲ့ ဉာဏ်ကောင်းတဲ့ ဒိုင်ယာလော့ခ်နဲ့ ကျွန်တော့်အတွက် ရယ်စရာဖြစ်စေတဲ့ သူပြောပုံပါပဲ။ အခု တစ်ဖက်က အမျိုး သမီးတွေက သဘောထား ကွဲလွဲနေနိုင်တယ်။
ဒါကြောင့် အရေပြားနဲ့ ပတ်သက်တယ်လို့ မထင်ပါဘူး။ လိမ္မာပါးနပ်သူဖြစ်ခြင်း။ Toyota “Swagger Wagon” ဗီဒီယိုသည် ကျွန်ုပ်မြင်ဖူးသမျှတွင် ဖန်တီးမှုအရှိဆုံးနှင့် အမိုက်ဆုံး ရယ်စရာအကောင်းဆုံး ဗီဒီယိုများထဲမှ တစ်ခုဖြစ်သည် (စီးပွားဖြစ်?)။ ဟုတ်တယ်၊ အဲဒါက Toyota Sienna ကို ဝယ်ချင်လာတယ်။
GoDaddy အတွက်ကတော့ အသားအရေ ဆွဲဆောင်မှု က ထိရောက်ပါတယ်။ ဒါပေမယ့် ရိုးရိုးသားသားပြောရရင် အဲဒီကြော်ငြာတွေမထွက်ခင်မှာ GoDaddy ကနေ ဝယ်ခဲ့ပြီး ကြော်ငြာတွေကြောင့် ထပ်မဝယ်ဖြစ်တော့ဘူး။ မနက်ဖြန်တွင် HostGator သည် "အရေပြား" ကြော်ငြာများကိုစတင်ပြသပါက၊ ကြော်ငြာကြောင့်သာအရာအားလုံးကိုငါပြောင်းပေးလိမ့်မည်။ ၎င်းတို့မှတစ်ဆင့် ကျွန်ုပ်၏နောက်ထပ်ဒိုမိန်းကိုလည်း မဝယ်ပါ။
15:2010 pm တွင်ဇူလိုင်လ 8, 21
Crud၊ HostGator ၏နောက်ဆုံးစာကြောင်းမှာ "I*wouldn't* switch all over them..." ဖြစ်သင့်သည်။
15:2010 pm တွင်ဇူလိုင်လ 8, 32
“ဒါပေမဲ့ ဒါ ငါ့အချက်ပဲ။ ကျွန်ုပ်တို့၏ ခေတ်မီဆန်းပြားသော ပစ်မှတ်များနှင့် ယိုယွင်းနေသော ကမ်ပိန်းများအားလုံးကို စွန့်လွှတ်ပြီး ရယ်စရာကောင်းသော စာကြောင်းအချို့ကို ရိုးရှင်းစွာရေးပြီး ကျွန်ုပ်တို့၏စျေးကွက်ရှာဖွေရေးလုပ်ဆောင်ရန် အသားအရေကို ပြသရန် တစ်စုံတစ်ဦးကို ရယူသင့်ပါသလား။ - Doug၊ ပြစ်မှားမှု မရှိပါဘူး၊ ဒါပေမယ့် မင်း ဒီအပေါ်မှာ အခြေခံပြီး ဝေးကွာနေတယ်။ Old Spice သည် အလွန်ဖန်တီးမှုရှိသော စျေးကွက်ချဲ့ထွင်မှုဖြင့် ၎င်းတို့၏ အမှတ်တံဆိပ်ကို ငယ်သော ပရိသတ်ထံသို့ ပြန်လည်နေရာချထားပါသည်။ ၎င်းတို့သည် ၎င်းတို့၏ ပစ်မှတ်ပရိသတ်များထံ ရောက်ရှိရန် ကြားခံများ၊ ပုံနှိပ်ခြင်း၊ ရုပ်မြင်သံကြား၊ အွန်လိုင်း (YouTube) နှင့် ဆိုရှယ်မီဒီယာ အများအပြားကို အသုံးပြုလျက်ရှိသည်။ စျေးကွက်ရှာဖွေသူတစ်ဦးအနေဖြင့်၊ ဤသည်မှာ အလွန်ကောင်းမွန်သော ကမ်ပိန်းတစ်ခု၏ အနည်းဆုံး အစကောင်းတစ်ခုမဟုတ်ဟု သင်မည်သို့ပြောနိုင်မည်နည်း။ ၎င်းတို့တွင် drip campaign မရှိသောကြောင့် စျေးကွက်မကောင်းဟု မဆိုလိုပါ။
15:2010 pm တွင်ဇူလိုင်လ 10, 10
'ဒီ Old Spice က ပိုရောင်းရမယ်ထင်တယ်' ဟာ အခုချက်ချင်း ဖြေရမှာ ကြောက်နေတဲ့ မေးခွန်းတစ်ခုပါ။
ဖြစ်လိမ့်မယ်ထင်ပါတယ်။ ဒါတွေအားလုံးဟာ အမှတ်တံဆိပ်အတွက် အပြုသဘောဆောင်ပါတယ်။ လွန်ခဲ့တဲ့2ရက်လောက်ကတည်းက တွေးကြည့်မိလို့ Old Spice ကို အသစ်တဖန်ပြန်ကြည့်ကြမယ် ထင်ပါတယ်... အထူးသဖြင့် Lady's scented body wash သုံးနေတယ်ဆိုရင် 🙂
သို့သော်၊ အမှတ်တံဆိပ်သည် ၎င်းနှင့် စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာ ချိတ်ဆက်ရန် ကျွန်ုပ်အတွက် တစ်စုံတစ်ရာ လုပ်ဆောင်နေပါသလား။ သစ္စာရှိမှုကို တည်ဆောက်သလား။ ဆွဲဆောင်မှုမှလွဲ၍ အမှန်တကယ် မဟုတ်ပါ။ ဤကမ်ပိန်းသည် ကျွန်ုပ်တို့၏တရားဝင်ကြော်ငြာဟုခေါ်သည့်အရာမှ ထွက်ပေါ်လာသေးသည့်အပိုင်းတစ်ပိုင်းမျှသာဖြစ်သည်ဟု ကျွန်တော်ထင်ပါတယ်။
15:2010 pm တွင်ဇူလိုင်လ 10, 12
Douglass မဲဆွယ်ပွဲသည် ကျိန်းသေရယ်စရာကောင်းသည်။ တံဆိပ်အကြောင်း လူတွေပြောနေကြပြီ။ သင့်အဖေ သို့မဟုတ် အဖိုးတစ်ဦးတည်းသာ အသုံးပြုခဲ့သည့် အမှတ်တံဆိပ်တစ်ခုအနေဖြင့် ၎င်းကို လူများ ထပ်မံကြိုးစားလာစေရန် ပထမဆုံးခြေလှမ်းဖြစ်သည်။ Old Spice သည် မုတ်ဆိတ်ရိတ်ပြီးနောက်တွင် များစွာပြောင်းလဲသွားသည်။ Old Spice သည် Axe ကဲ့သို့သော အခြားအရာများထက် ကမ္ဘာပေါ်တွင် စိတ်ဝင်စားစရာအကောင်းဆုံးသော ယောက်ျားကို ရယ်စရာနှင့် နှိုးဆော်သည့် မှတ်ချက်အတွက် ပိုသွားသည်ဟု ကျွန်တော်ထင်ပါတယ်။
GoDaddy နဲ့ နှိုင်းယှဥ်ပုံကို ငါသဘောမတူနိုင်ဘူး။ GoDaddy သည် ထိုကြော်ငြာများနှင့်အတူ အမျိုးသားများကို ပစ်မှတ်ထားနေသည်မှာ ထင်ရှားသည်။ အကယ်၍ Old Spice သည် Sex Appeal ကိုရောင်းရန်အသုံးပြုပါက Axe နှင့်တူသော GoDaddy မိန်းကလေးများသည် သူ့အပေါ်၌ လဲကျနေမည်ဖြစ်သည်။
Patric က လုပ်ဆောင်နေတဲ့ အချက်တော်တော်များများကို ကျွန်တော်သဘောတူပြီး "Swagga Wagon" က အရမ်းကောင်းတဲ့ ကြော်ငြာတစ်ခုဖြစ်ပြီး Trunk Monkey ကြော်ငြာတွေကလည်း အရမ်းမိုက်ပါတယ်။ Funny က ပိုကြာပြီး အမှတ်ရစရာလို့ ထင်ပါတယ်။
15:2010 pm တွင်ဇူလိုင်လ 10, 13
ဒီကမ်ပိန်းကိုလည်း သဘောကျတယ်လို့ ဦးစွာပြောလိုပါတယ်။ ပျော်စရာကောင်းပြီး လူတွေလည်း ပါဝင်ချင်ကြပါတယ်။ သူတို့ ဘာထပ်တောင်းနိုင်မလဲ။
ယခု Old Spice ကို အမှန်တကယ် ရောင်းချခြင်း ရှိ၊ မရှိ မေးခွန်းနှင့် ပတ်သက် ၍ ငြင်းခုံစရာ ဖြစ် သည်။ "အဲဒါက 70's မှာ အဖေသုံးခဲ့တဲ့" မင်းနဲ့ပတ်သက်တဲ့ တူညီတဲ့ အတွေးအမြင်တွေ အများ ဆုံးရှိမယ်ထင်ပါတယ်၊ ဒါပေမယ့် ကမ်ပိန်းက အဲဒီပုံကို ပြောင်းလဲဖို့ ကြိုးစားနေတယ်လို့ ထင်ပါတယ်။ အဖေ့အတွက် တံဆိပ်အစား ပျော်စရာကောင်းတဲ့ အမှတ်တံဆိပ်တစ်ခုအဖြစ် ငယ်ရွယ်တဲ့လူတွေကို စဉ်းစားလာအောင် ကြိုးစားနေပါတယ်။
ဒီမနက် ကျွန်တော့်ရဲ့ twitter stream မှာ တစ်ယောက်ယောက်က camaign ကိုကြည့်ပြီးနောက် သူတို့ရဲ့ brand ကို အရင်ကထက် ပိုပွင့်လင်းလာတယ်လို့ပြောတာကို ကျွန်တော်တကယ်သတိထားမိခဲ့ပါတယ်။ ဝယ်မယ်လို့ ဆိုလိုတာလား။ ဖြစ်နိုင်စရာ။ အဲဒါက အနံ့ကို သူတို့ ကြိုက်ပုံ ပေါက်လိမ့်မယ်၊ ဒါပေမယ့် အနည်းဆုံးတော့ ဆေးဆိုင်က ဟင်းခတ်အမွှေးအကြိုင် အဟောင်းကို အရင်ကထက် ကြည့်တဲ့လူတွေ အများကြီး ပိုရှိမယ် ထင်ပါတယ်။
Sheldon၊ Sysomos အတွက် ရပ်ရွာမန်နေဂျာ
အခု ငါ မြင်းပေါ်တက်နေတယ်။
15:2010 pm တွင်ဇူလိုင်လ 10, 32
ဆိုရှယ်မီဒီယာကနေတစ်ဆင့် ဒီကြော်ငြာတွေကို ဘယ်လိုထုတ်လုပ်ပြီး အချိန်နဲ့တပြေးညီ ထုတ်လုပ်တယ်ဆိုတာကို သင်မဖတ်ရသေးဘူးဆိုရင်တော့ အရမ်းစိတ်ဝင်စားဖို့ကောင်းတဲ့ ဖတ်စရာတစ်ခုပါပဲ။ http://www.readwriteweb.com/archives/how_old_spice_won_the_internet.php?
ပျမ်းမျှ7မိနစ်တစ်ခုစီတွင် တီဗီအရည်အသွေးဗီဒီယိုများ တိုက်ရိုက်ထုတ်လွှင့်သည်။
15:2010 pm တွင်ဇူလိုင်လ 10, 39
ဟုတ်တယ်၊ Old Spice က အေးမြပြီး အလုပ်လုပ်တယ်လို့ ထင်ရလောက်အောင် ငါမိုက်တယ်။ Old Man ၏အမှတ်တံဆိပ်အဖြစ် လူအများစုသည် ခိုတွင်း Old Spice ရှိနေသေးသည်ဟု ယူဆပါက မေးခွန်းထုတ်စရာဖြစ်လာသည်- ထိုဖန်စီအမှတ်တံဆိပ်၊ ကြော်ငြာများနှင့် ပုံနှိပ်ကြော်ငြာများ အလုပ်ဖြစ်ပါသလား။ ၎င်းတို့သည် Old Spice YouTube ကြိုးစားမှုထက် များစွာပို၍စျေးကြီးကြောင်း ကျွန်ုပ်အာမခံပါသည်။
15:2010 pm တွင်ဇူလိုင်လ 10, 47
ငါမင်းနဲ့အတူရှိနေတယ်၊ ​​ဒါဟာ ဖျော်ဖြေမှု ၊ ဆွဲဆောင်မှုရှိပြီး ကောင်းကောင်းလုပ်ဆောင်ခဲ့တယ် လို့ ငါထင်ခဲ့တယ် ၊ ဒါပေမယ့် ငါတို့အားလုံး ကြီးကျယ်ခမ်းနားတဲ့ ဆိုရှယ်မီဒီယာ အောင်မြင်မှုလို့ မကြေငြာခင် အရောင်းအပေါ် သက်ရောက်မှုကို တကယ်မြင်ချင်ပါတယ်...
(ကျွန်တော် ဒီအကြောင်းကို ဘလော့ဂ်ရေးထားပါတယ်။ http://bit.ly/9SiQ3L)
15:2010 pm တွင်ဇူလိုင်လ 10, 51
ငါ့ရည်းစားက မနေ့ညက အိမ်ပြန်လာပြီး ဒီဗီဒီယိုတွေကြောင့် မနေ့က ပထမဆုံး အကြိမ် ဟင်းခတ်အမွှေးအကြိုင်ကို ကောက်ယူပြီး အနံ့ခံတယ်လို့ ပြောခဲ့တယ်။ အဲဒါကို သဘောကျပြီး စမ်းကြည့်စေချင်တယ်။
၎င်းသည် နမူနာအရွယ်အစားတစ်ခုဖြစ်သည်၊ သို့သော် ထိုနမူနာအတွင်းတွင် ၎င်းသည် အလုပ်လုပ်ပါသည်။ 🙂
15:2010 pm တွင်ဇူလိုင်လ 10, 57
၎င်းတို့သည် ယနေ့ခေတ်တွင် အမှတ်တံဆိပ်အများစုကို နှစ်သက်လိုသည့်အရာကို သေချာပေါက်အောင်မြင်ပြီး (စားသုံးသူမှ လှုံ့ဆော်ပေးသည့် လှုံ့ဆော်မှုတစ်ခု)၊ Old Spice သည် နောက်ဆုံးတွင် 'အေးမြခြင်း' ဖြစ်လာပြန်သည်။ (အမ်... အေးအေးဆေးဆေးပဲလား? Old Spice အကြောင်းကို သိပ်သိတာ ငယ်လွန်းမယ်ထင်တယ်..)
ကျွန်ုပ်အတွက်၊ ဤကြော်ငြာမျိုးသည် GoDaddy ကဲ့သို့ပင် သင့်အား 'ယုံကြည်မှု' အမှတ်တံဆိပ်ကို သေချာပေါက်ဖြစ်စေမည်မဟုတ်ပါ (ဝဘ်ဆိုက် hosting တွင် ယုံကြည်စိတ်ချရမှုအဆင့် လိုအပ်သည့်အရာဖြစ်သည်—လူ၏ရနံ့၊ သိပ်မရှိပါ) သို့သော် ကျွန်ုပ်သည် အဟောင်းကို မြင်ပါက၊ ဆေးဆိုင် စင်ပေါ်က ဟင်းခတ်အမွှေးအကြိုင်တွေကို အခုပဲ အနံ့ခံလိုက်ရုံနဲ့ သူ့အနံ့က ဘာလဲဆိုတာ သိဖို့ပဲ 🙂 ငါ တံဆိပ်နဲ့ စေ့စပ်ထားတာ၊ အမှတ်တံဆိပ်ကို စိတ်ဝင်စားတယ်… တစ်ခုခုတော့ တွက်နေတာပဲ မဟုတ်လား။
လူမိုက်က ကောင်းပါတယ်။ လူမိုက်သည် ချဉ်းကပ်နိုင်သည်၊ ပင်မရေစီးကြောင်း။ လူမိုက်သည် လွတ်မြောက်ခြင်း ဖြစ်၏။ ဒါပေမယ့် ဒါကို လူမိုက်လို့ မခေါ်နိုင်ပါဘူး။ လိမ္မာပါးနပ်ပြီး လိင်မှုကိစ္စ။ ခုခံရန် မဖြစ်နိုင်သော ပေါင်းစပ်မှု။ 😉
ဆန့်ကျင်ဘက် ရှုထောင့်ကို ကြားရတာ ကောင်းပါတယ်၊ ဒါပေမယ့် ဒီကမ်ပိန်းက GoDaddy Super Bowl ကြော်ငြာတွေထက် အရမ်းကွာခြားပါတယ်။ တရားမျှတသော IMO နှိုင်းယှဉ်မှုမဟုတ်ပါ။ ပန်းသီးမှ ပန်းသီးမဟုတ်၊ ပန်းသီးမှ ribeye ဖြစ်သည်။
GoDaddy ကမ်ပိန်းနှင့် တစ်ခုတည်းသော ဆင်တူသည့်အချက်မှာ "အရေပြားပြသခြင်း" အပိုင်းဖြစ်သည်။
အသားအရည်ကြောင့် အသားအရေက မိုက်မဲပြီး မိုက်တာတော့ သဘောတူပါတယ် ဒါပေမယ့် ဒီအခြေအနေမှာတော့ ဆွဲဆောင်မှုရှိတဲ့ လှုံ့ဆော်မှုတစ်ခုအတွက် ပေါင်းစပ်ဖက်ရှင်အဖြစ် သုံးပါတယ်။
သက်သေ? မိန်းကလေးများစွာသည် အခမဲ့ GoDaddy ကြော်ငြာများကို ၎င်းတို့၏ သူငယ်ချင်းများနှင့် ကွန်ရက်များနှင့် မျှဝေသည်ဟု မထင်ပါ။ တစ်နည်းအားဖြင့်၊ အမျိုးသားများစွာသည် ရှပ်အင်္ကျီမရှိသောလူကို အဓိကမြင်သာသည့်အစိတ်အပိုင်းတစ်ခုအဖြစ် ထားရှိလင့်ကစား Old Spice ကြော်ငြာများကို ဆက်လက်မျှဝေခဲ့ကြသည်။ ဒီလိုလုပ်ဖို့ ဆန္ဒရှိတယ်ဆိုတဲ့အချက်က “အရေပြား” ဟာ သူတို့မျှဝေရတဲ့ အကြောင်းအရင်းမဟုတ်ဘူးဆိုတာကို ပြသနေပါတယ်။
GoDaddy ၏ကြော်ငြာများသည် ရိုးရာတစ်နည်းတစ်ဖုံ ကြော်ငြာများဖြစ်သည်၊ မှန်ပါသလား။ Danica Patrick နှင့် တိုက်ရိုက် “ထိတွေ့ဆက်ဆံ” ရန် ကျွန်ုပ်အတွက် စိတ်ကြိုက်ပြင်ဆင်ခြင်း မရှိခဲ့ပါ။ သင်၏အခြားဥပမာများနှင့်အတူတူပင်။ Old Spice ကောင်လေးက သူ့ကို မေးခွန်းတစ်ခုမေးတဲ့လူကို မတုံ့ပြန်ရင်တောင် GoDaddy၊ Twilight၊ Sex and City နဲ့ ဘီယာကြော်ငြာတွေမှာ ကွဲပြားမှုတွေ အများကြီးရှိတဲ့ ဖားတွေကို တုံ့ပြန်မယ်လို့ မျှော်လင့်ပြီး သူတုံ့ပြန်တဲ့အချက်ကို ပေးစွမ်းနိုင်မှာပါ။ .
၎င်းသည် ကွဲပြားစေသော ထိတွေ့ဆက်ဆံမှုနှင့် ပုဂ္ဂိုလ်ရေးသီးသန့်ပြုလုပ်မှုဖြစ်သည်။ ပညာရှိမားကတ်တင်းသမားတစ်ယောက်သည် အီးမေးလ်စျေးကွက်ရှာဖွေရေးအားလုံးသည် 1) မျှော်မှန်းထားသည် 2) ကိုယ်ရေးကိုယ်တာနှင့် 3) သက်ဆိုင်ရာဖြစ်သင့်သည်ဟု တစ်ခါကပြောခဲ့ဖူးသည်။ ကုမ္ပဏီအများစုသည် အီးမေးလ်ဖြင့်ပင် မလုပ်ဆောင်နိုင်ဘဲ Old Spice သည် ကြော်ငြာကမ်ပိန်းတစ်ခုဖြင့် လုပ်ဆောင်နိုင်ခဲ့သည်။
15:2010 pm တွင်ဇူလိုင်လ 10, 58
ပြီးခဲ့သော သီတင်းပတ် မတိုင်မီက အဘိုးအို၏ အနံ့ကို ရယ်ရယ်မောမော ရည်ညွှန်းခြင်း မရှိဘဲ 'ဟင်းခတ်အမွှေးအကြိုင်' ဟူသော စကားကို ပြောဖူးသည်ကို မယုံပါ။ သို့သော်၊ ကျွန်ုပ်လည်း 'Old Spice' ဆိုရှယ်မီဒီယာလှုပ်ရှားမှု Kool-Aid ကို သောက်ခဲ့ဖူးသည်။ ကိုယ်ကြိုက်တယ်။ ဆွဲဆောင်မှုရှိတယ်။ ၎င်းသည် ကျွန်ုပ်အား Twitter သို့ပြေးပြီး Old Spice Guy သည် ကျွန်ုပ်အတွက်သာ ဗီဒီယိုတစ်ခု ဖန်တီးပေးမည်ဟု မျှော်လင့်ခြင်းဖြင့် အမှန်တကယ် လိမ္မာပါးနပ်မှုတစ်ခုခုကို ရယူလိုစေသည်။ သူရဲ့ လိင်ဆွဲဆောင်မှုနဲ့ ပတ်သက်မှု ရှိပါသလား။ မဟုတ်ဘူး၊ အဲဒါက ခဏတာ ကျော်ကြားမှု (ဟုတ်တယ်၊ ငါက ရေတိမ်ပိုင်းပဲ)၊ အမှတ်တံဆိပ်တစ်ခုနဲ့ တကယ်မိုက်တဲ့ ထိတွေ့ဆက်ဆံမှု (ဝယ်သည်ဖြစ်စေ မဝယ်သည်ဖြစ်စေ) နဲ့ သူငယ်ချင်းတွေကို မျှဝေရတာ တကယ်ပျော်စရာကောင်းတဲ့အရာတစ်ခုပါ။ ဤစိတ်လှုပ်ရှားမှုအားလုံးကို ကျွန်ုပ်အတွက် အရောင်းအ၀ယ်အဖြစ် ဘာသာပြန်ပေးပါသလား။ မဟုတ်ဘူး၊ ဒါပေမယ့် နောက်တစ်ခါ ငါစင်ပေါ်ရောက်တဲ့အခါ၊ သူတို့ရဲ့ ထုပ်ပိုးမှု ဆိုးရွားတဲ့ ကောင်လေးတစ်ယောက်ရဲ့ ထိပ်ကနေ ရုန်းထွက်ပြီး တုန်လှုပ်ချောက်ချားသွားတော့မယ်။ ကြီးကျယ်ခမ်းနားတဲ့ မဲဆွယ်ပွဲကြီးနဲ့ ဆေးဆိုင်မှာ ပိုက်ဆံထုတ်ပစ်တဲ့ကြားက အရမ်းအရေးကြီးတဲ့ အတားအဆီးတစ်ခုရှိတယ်။ အဲဒါ ထုတ်ကုန်။ အနံ့မကောင်းရင် ကောင်းကောင်းအလုပ်လုပ်ပြီး ပေးရတဲ့ငွေကို တန်ဖိုးရှိအောင် အရောင်းအဝယ်မလုပ်ပါဘူး။ သူတို့၏အမှတ်တံဆိပ်ကို ကျွန်ုပ်ထည့်သွင်းစဉ်းစားရန် တွန်းအားဖြစ်စေသော Old Spice တွင် ကောင်းမွန်ပါသည်။
15:2010 pm တွင်ဇူလိုင်လ 11, 00
- အသိပညာ- စစ်ဆေးပါ။
- စကားဝိုင်း- စစ်ဆေးပါ။
ဒါက ကြော်ငြာ ကမ်ပိန်းအများစု တတ်နိုင်သလောက် ၊ ဒါပေမယ့် ငါ့အတွက်ကတော့ ဒီထက်ပိုဝေးသွားပြီ။
– ထည့်သွင်းစဉ်းစားခြင်း (စင်ပေါ်မှကြည့်ပါ၊ သတိပြုပါ၊ စဉ်းစားကြည့်ပါ)
- တစ်ကြိမ်ဝယ်ယူမှု- စစ်ဆေးပါ။
ဒါတွေကြောင့် ငါ့ရဲ့ gf (သူမက ကနေဒါမှာဆိုရင်) ရပ်လိုက်၊ အနံ့ခံပြီး စမ်းကြည့်ချင်နေတာတွေ့တယ်။ ၎င်းသည် ကြည့်ရှုသူများ၏ 1/20th တစ်ဦးလျှင် တစ်ကြိမ်သာ ဝယ်ယူမှုကို တွန်းအားပေးနိုင်သော်လည်း ထိုအချိန်တွင် ၎င်းသည် ထပ်ခါတလဲလဲ ဝယ်ယူမှုများကို တွန်းအားပေးရန် ထုတ်ကုန်၏အလုပ်ဖြစ်သည်။
တိမ်မြုပ်နေ၍ ပြောရခက်သော ကျွန်တော့်စာအုပ်များတွင် အောင်ပွဲတစ်ခုဖြစ်သည်။ ပြောင်မြောက်စွာ ကွပ်မျက်လိုက်သည်၊ ရယ်စရာကောင်းသော ရယ်စရာကောင်းသော၊ ဆိုရှယ်မီဒီယာတွင် မှော်ဆန်စွာ ပေါင်းစပ်ထားသော်လည်း တိမ်မြုပ်နေဆဲဖြစ်သည်။ ငါကချစ်တယ်။
15:2010 pm တွင်ဇူလိုင်လ 11, 11
1. အသိပညာတိုးပွားစေသည်။ ပြီးပြီ။
2. စကားဝိုင်းကို စတင်ပါ။ ပြီးပြီ။
3. စင်ပေါ်ရှိ Old Spice ကို သတိပြုမိအောင်လုပ်ပါ။ ပြီးပါပြီ (ကျွန်ုပ်၏အထက်မှတ်ချက်များကိုဖတ်ပါ)။
4. ကုန်ပစ္စည်းကိုဝယ်ရန်လူများကိုရယူပါ။ တဖန် ပြီးပြီ။ နံပါတ်တွေ ထပ်ဝင်နေသေးတာ သေချာပေမယ့် ငါ့သူငယ်ချင်းတွေက ဖေဖေ အရင်သုံးဖူးပေမယ့် စမ်းသုံးကြည့်တာ သတိထားမိပြီးသားပါ။
ဒါပေမယ့် အဲဒါကို ဆိုရှယ်မီဒီယာရဲ့ အောင်မြင်မှု ဇာတ်လမ်းလို့ ခေါ်လို့တော့ မဖြစ်သေးပါဘူး။ Brand Awareness မြှင့်တင်ရာတွင် အောင်မြင်ပါသလား။ ငရဲ ဟုတ်တယ် တကယ်တော့၊ Old Spice ကောင်လေးနဲ့ Dos Equis ကောင်လေးကြား ရန်ပွဲက ဘယ်သူအနိုင်ရမလဲဆိုတဲ့ ကိန်းဂဏန်းတွေ ရှိတယ် (Chuck Norris မရှိဘူးလို့ ကျွန်တော်ထင်တယ် သူအနိုင်ရမယ်လို့ အားလုံးသိတဲ့အတွက်) ဒါပေမယ့် ရောင်းအားနံပါတ်တွေကို မတွေ့မချင်း၊ ထုတ်ကုန်ကို ယခုအချိန်အထိ အသိပညာပေးလှုံ့ဆော်မှုတစ်ခုအဖြစ်သာ အသုံးပြုထားခြင်းဖြစ်သည်။ :) မေးခွန်းမှာ သင်ချစ်မြတ်နိုးနိုင်သော်လည်း ထုတ်ကုန်ကို ရွှေ့ပြောင်းနိုင်ပါသလား။
Dos Equis ကို သင်ချစ်နိုင်သော်လည်း Dos Equis ဘီယာကို သင်နှစ်သက်ပါသလား။ ပထမအကြိမ် ကြော်ငြာတွေပြီးရင် တစ်ကြိမ်ဝယ်ဖူးလား။ နောက်မှ ဆက်ဝယ်ခဲ့တာလား။ ကုန်အမှတ်တံဆိပ်နှင့် ထုတ်ကုန်အကြား အဆက်အစပ်ပြတ်တောက်သွားပါက အဆုံးပန်းတိုင်မဟုတ်သည့် တစ်ကြိမ်တည်းဝယ်ယူမှုများသာ ရရှိမည်ဖြစ်သည်။ မည်မျှစွဲမက်ဖွယ်ကောင်းသော ဆောင်ပုဒ်(များ)ကို အမှတ်တံဆိပ် သစ္စာစောင့်သိမှုကို သင်ဖန်တီးလိုပါသည်။
ငါက အခြေအမြစ်မရှိဘူးလို့ ထင်လား။
ငါ့ကိုခေါ်ပါ ဒါပေမယ့် သတိပေးလိုက်ပါ- ငါက တိုက်ခိုက်ရေးသမားမဟုတ်ပေမယ့် ငါက တိုက်ခိုက်ရေးသမားမို့ အကြံဥာဏ်မပေးပါနဲ့။
အခု မင်းမိန်းမကိုကြည့်၊ ငါ့ကိုကြည့်။ မြင်းပေါ်တက်နေတယ်။
15:2010 pm တွင်ဇူလိုင်လ 11, 14
ဟိုတစ်ညမှာ ကုန်စုံဆိုင်ရဲ့ လမ်းလျှောက်ရင်း Old Spice ကို တွေ့ခဲ့တယ်။ ရေချိုးခန်းသုံးပစ္စည်းတွေ ကောင်းကောင်းမစုမိလို့ စမ်းသုံးကြည့်ဖို့ ဝယ်ခဲ့တာ။ ကမ်ပိန်းသည် ၎င်းကို ထိပ်တန်းရောက်အောင် တွန်းအားပေးနေသည်မှာ သေချာသည် နှင့် ၎င်းသည် ရောင်းရန် သို့မဟုတ် နှစ်ခုပြုလုပ်နေခြင်းဖြစ်ကြောင်း သက်သေပြနိုင်မည်ဖြစ်သည်။
ကမ်ပိန်းနဲ့ ပတ်သက်ပြီး ကျွန်တော် သဘောကျတာက အင်တာနက် ယဉ်ကျေးမှုရဲ့ ထူးခြားတဲ့ သဘောသဘာဝကို နားလည်လို့ပါပဲ။ အဖွဲ့သည် ကတိကဝတ်ပြုရုံမျှမက နားထောင်၍ တုံ့ပြန်ကြသည်။ Alyssa Milano နှင့် ပရောပတေးလုပ်ခြင်းသည် သူမ၏အိမ်သို့ နှင်းဆီပန်းများပေးပို့ခြင်းပင်ဖြစ်သည်။ လက်ထပ်ခွင့် အဆိုပြုလွှာပေးပို့ခြင်း။ Old Spice Man သည် ကျော်ကြားသူများနှင့်သာ စကားပြောနေခြင်းကို ပြောင်မြောက်သောနောက်လိုက်ကြီးကြီးမားမားမရှိသူတစ်ဦးအား တိုက်ရိုက်တုံ့ပြန်ခြင်းဖြစ်သည်။ reddit အသိုက်အဝန်းဖန်တီးနိုင်စေရန် soundbites များပေးပို့ခြင်း။ http://oldspicevoicemail.com
ဒါက မြင့်မြတ်တဲ့ အနုပညာလား။ မဟုတ်ဘူး၊ ဒါပေမယ် ဆပ်ပြာရောင်းရတာက လက်ရာမြောက်တယ်။
ကမ်ပိန်းမှ P&G သည် မည်သို့သော ရလဒ်မျိုး တွေ့ရမည်ကို ကျွန်ုပ် အသေအချာ လေ့လာရန် စိတ်ဝင်စားပြီး မကြာသေးမီက ကမ်ပိန်း၏ အဆက်အစပ်သည် ကနဦး စူပါပန်းကန်လုံး ကြော်ငြာနှင့် နှိုင်းယှဉ်ပါက အထင်ကြီးလောက်စရာ အရောင်းအ၀ယ် နှစ်မျိုးလုံးနှင့် နှိုင်းယှဉ်လေ့လာလိုပါသည်။
…monocle အပြုံး P_^
ဘလော့ World Expo
15:2010 pm တွင်ဇူလိုင်လ 11, 18
ဤသည်မှာ ကြီးမားသော အောင်ပွဲခံသည့် ကမ်ပိန်းဖြစ်သည်ကို သင်မည်သို့သိသနည်း။
တုံ့ပြန်မှုတွေကြောင့်ပါ။ မင်းရဲ့ခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာမှုမှာ လုံးဝမှန်ကန်ပေမယ့် ကြော်ငြာက အနုပညာနဲ့တူတယ်။ လူတွေက ကောင်းတယ်လို့ထင်ရင် တိမ်မြုပ်တာ၊ တင်းကြပ်တာ၊ ပါးနပ်တာ၊ ဖောက်ပြန်တာ၊ မောပန်းတာ၊ ခြေဆွံ့တာ၊ ဘာပဲဖြစ် ဖြစ် ကောင်းကျိုးတွေ ပေးတယ်။ ရယ်စရာကောင်းတာက ရယ်စရာကောင်းတယ်၊ ရလဒ်က အရေးကြီးတယ်။
အောက်ဖော်ပြပါ လူအများအပြားသည် အသက် 60 နှစ်အောက် မည်သူမျှ မဝယ်နိုင်သော ထုတ်ကုန်တစ်ခုကို စဉ်းစား၊ ကြိုးစား ဝယ်ယူနေကြပြီဖြစ်ကြောင်း သက်သေထွက်ဆိုထားပြီးဖြစ်သည်။
ဒီကောင်တွေက အတွေ့အကြုံအရှိဆုံးနဲ့ ရိုင်းစိုင်းတဲ့ ဆိုရှယ်မီဒီယာ လွှမ်းမိုးမှုရှိသူအချို့ကို ဘုတ်ပေါ်တက်ပြီး သူတို့ရဲ့ ကမ်ပိန်းကို မြှင့်တင်ပြီး တကယ့်လမ်းပေါ်ကို ယုံကြည်လာအောင် လှုံ့ဆော်ပေးတယ်။ တံဆိပ်အနည်းငယ်သာ လုပ်ဖူးသည်။
15:2010 pm တွင်ဇူလိုင်လ 11, 22
ကျွန်ုပ်သည် လက်ရှိတွင် ဟင်းခတ်အမွှေးအကြိုင် ထုတ်ကုန်ဟောင်းများကို အသုံးပြုနေပြီး ကျော်ကြားသော 'I'm on horse' အရောင်းအ၀ယ်ပြုလုပ်သည့်အချိန်ကတည်းက ၎င်းတို့ကို စတင်ဝယ်ယူကြောင်း သိပါသည်။ ကြော်ငြာအတွက် လုံးလုံးကျေးဇူးတင်ပါသလား။ ကျွန်တော်မသေချာဘူး။
ဤကမ်ပိန်းဖြင့် လုပ်ငန်းသစ်ကို တိုင်းတာနိုင်သည်ဖြစ်စေ ငါ့အတွက်က အရေးကြီးဆုံးရလဒ်မဟုတ်ပေ။ Jeremy Wright သည် ၎င်း၏မှတ်ချက်တွင် ဖော်ပြထားသကဲ့သို့၊ အပြုသဘောဆောင်သောစကားဝိုင်းများသည် အမှတ်တံဆိပ်၏အတွေ့အကြုံနှင့် လူအများနှင့်မည်ကဲ့သို့နေရာယူထားသည်ကို သတ်မှတ်ပေးသောကြောင့် စကားဝိုင်းများကို ထိုက်တန်သောမက်ထရစ်အဖြစ် သတ်မှတ်သင့်သည်ဟု ကျွန်တော်ထင်ပါတယ်။ ဆိုရှယ်မီဒီယာသည် အမှတ်တံဆိပ်တစ်ခုအား စားသုံးသူများ၏ လွှမ်းမိုးမှုကို ခံနိုင်ရည်ရှိစေသည့် နည်းလမ်းကောင်းဖြစ်ပြီး ၎င်းသည် ဝယ်သူနှင့် ပိုမို သံယောဇဉ်ရှိစေပါသည်။ Old Spice သည် ဖောက်သည်သည် 'အသင်း၏အစိတ်အပိုင်း' ဟု ခံစားရသည့် အလားတူ ခံစားချက်ကို ထိမိ၍လဲမိသည်ဟု ခံစားရပါသည်။
15:2010 pm တွင်ဇူလိုင်လ 11, 29
အောက်ပါ Clay နှင့်သဘောတူသည်... GoDaddy သည် အဝေးမှ ဖျော်ဖြေမှု ၊ ရင်ဘတ်များ မပါရှိ ၊ ဘာကိုမျှ မပေးဆောင်နိုင်သောကြောင့် ပျက်ကွက်သည် ၊ 2010 ခုနှစ်တွင် ရင်သားများကို ပြသခြင်းသည် ကောင်းသော 'အထူးအကျိုးသက်ရောက်မှုများ' ရှိသော Hollywood 'Blockbuster' ကဲ့သို့ ထိရောက်မှု ရှိသော်လည်း ဇာတ်လမ်းမရှိပါ... Jurassic Park သည် ပျက်သွားသည် ပုံစံခွက် (တစ်နေ့တာအတွက် ဆွဲဆောင်မှုရှိတဲ့ ဇာတ်လမ်းတစ်ပုဒ်ပါ) … ဒါပေမယ့် မှတ်မိသေးလား အိုး 'Godzilla' ကို ပြန်လည်ရိုက်ကူးထားတာတော့ မသိဘူး… ရုပ်ရှင်က Matthew Broderick က သူတစ်ခါမှ မကြားဖူးတာတောင်မှ လိုချင်တာ သေချာပါတယ်... မဿဲကို အရှက်ကွဲစေတယ်။
GoDaddy ကြော်ငြာများ = ကြောက်မက်ဖွယ်ကောင်းသော Godzilla ကို ပြန်လည်ရိုက်ကူးခြင်း … Old Spice = ရုပ်ရှင်အသစ် Inception ( လောင်းကြေးထပ်ရုံဖြင့် မကြည့်ရသေးပါ ) … ဒါပေမယ့် ပရိသတ်ကို ဖမ်းစားနိုင်တဲ့ အမြင်အာရုံနဲ့ အံသြဖွယ်ရာ ဇာတ်လမ်းတို့ ရောယှက်ထားပါတယ်။
ဤကိစ္စတွင်၊ Old Spice ကြော်ငြာများသည် ရယ်စရာကောင်းပြီး လူတစ်ဦးချင်းစီနှင့် ချိတ်ဆက်သည့် နည်းလမ်းနှင့် နည်းလမ်းသည် အမှန်တကယ် 'ထက်မြက်သည်' ဖြစ်သည်... ၎င်းသည် အချိန်ကာလတစ်ခုသာဖြစ်သည်။
15:2010 pm တွင်ဇူလိုင်လ 12, 17
တောင်းပန်ပါတယ် Chris! @GuyKawasaki နှင့် @AlyssaMilano တို့သည် 'ငယ်သော' ပရိသတ်မဟုတ်ဟု မထင်ပါ။ ဆိုရှယ်မီဒီယာသည် 'ငယ်သော' ပရိသတ်မဟုတ်ပါ။ အသက် 30 နှစ်လယ်နှင့်အထက် ဆိုရှယ်မီဒီယာတွင် အလျင်မြန်ဆုံး မွေးစားနှုန်းထားရှိကြောင်း ခေတ်ရေစီးကြောင်းများက ပြသနေသည်။ ၎င်းသည် သန့်ရှင်းသော ဗိုင်းရပ်စ်ပြဇာတ်တစ်ခုဖြစ်သည်… ပရိသတ်ကြီးများနှင့် အွန်လိုင်းရှိလူများကို ညွှန်ပြကာ ၎င်းတို့၏ အာရုံစူးစိုက်မှု (၎င်းတို့၏ အတ္တကို) ဖမ်းယူကာ Old Spice အကြောင်း ပြောဆိုစေသည့် တစ်စုံတစ်ခုကို ပြုလုပ်ပါ။
မားကတ်တင်းက မကောင်းဘူးလို့ မပြောခဲ့ဘူး၊ တကယ်အလုပ်လုပ်မယ့် မားကတ်တင်းလားဆိုတာ သိချင်ရုံပါပဲ။
15:2010 pm တွင်ဇူလိုင်လ 12, 31
အိုး... ဟင်းခတ်အမွှေးအကြိုင်ဟောင်းတွေ ဝတ်တယ်။ ငါအရမ်းခေတ်မမှီမှန်း ငါမသိလိုက်ဘူး။
15:2010 pm တွင်ဇူလိုင်လ 12, 33
Old Spice စတန့်အကြောင်း မင်းရဲ့ခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာမှု = FALSE။
Old Spice ဗီဒီယိုများသည် ဖန်သားပြင်ပေါ်ရှိ မည်သည့်အရာမှမဟုတ်သော်လည်း သူပြောနေသည့်အရာသည် အံ့သြဖွယ်ကောင်းသည်။ အချက်နှစ်ချက်ပါတာတော့ သေချာပါတယ်- (က) သူပြောနေတာနဲ့ (ခ) သူပြောတာက လိမ္မာတယ်။ သူတို့ရဲ့ တုံ့ပြန်မှုလေးတွေထဲကို ပြန့်နှံ့လာတဲ့ အသိပညာပမာဏဟာ တိုတိုတုတ်တုတ်နဲ့ အကျုံးဝင်ပါတယ်။ သူတို့က ဘာပြောရမယ်ဆိုတာ အတိအကျသိပြီး အဲဒီတုံ့ပြန်မှုရဲ့ အချိန်နဲ့ အချိန်ကိုက်မှုက ကျွန်တော်တို့ သဘောကျတဲ့အရာပါ။ ဝဘ်ကို စီးနင်းစဉ်တွင် လူမဆန်သော အမည်မသိ အတွေ့အကြုံကို ကျွန်ုပ်တို့ လွန်စွာ အသုံးပြုလေ့ရှိကြပြီး Joe Everyman (ဆိုလိုရင်းကို ချိုးဖျက်ရန်) ကို ပြန်လည်ပြောဆိုရန် ကြိုးပမ်းမှုတိုင်းကို လက်နှစ်ဖက်ဖြင့် ကြိုဆိုပါသည်။ Flash Mobs တွေက အခုခေတ်မှာ ဘာကြောင့် အရမ်းခေတ်စားလာတာလဲ။ အတိအကျတူညီသောအကြောင်းပြချက်အတွက် (သို့သော် polis အတွင်း ကျွန်ုပ်တို့၏ မိုက်မဲသောအတွေ့အကြုံနှင့်စပ်လျဉ်းသည်)။ ဖေါက်ပြန်မှုတွင် ပျောက်ကွယ်သွားမည့် ဒုတိယသဘာဝနီးပါးဖြစ်သောကြောင့် အင်တာနက်ပေါ်တွင် မျှော်လင့်ထားသလောက်နည်းပါးပါသည်။ Old Spice သည် စကားပြောဆိုခြင်းကို မယုံနိုင်လောက်အောင် ထင်ရှားစေခဲ့ပြီး အကယ်၍ ကျွန်ုပ်တို့ ပါဝင်ခဲ့မည်ဆိုလျှင်၊ ကျွန်ုပ်တို့သည် Joe Everyman နှင့်အတူ ပါဝင်ချင်ပါသည်။
15:2010 pm တွင်ဇူလိုင်လ 12, 53
15:2010 pm တွင်ဇူလိုင်လ 12, 59
ငါ Old Spice ရေချိုးခန်းသုံးထုတ်ကုန်များ။ အနံ့အသက်ဆိုးဆေး သို့မဟုတ် အခြားအရာမရှိပါ။ သူတို့ရဲ့ ရေချိုးခန်းသုံးပစ္စည်းတွေက တကယ်ကောင်းပါတယ်။ ဒီကြော်ငြာတွေ ရိုက်ကွင်းမှာ စပြီး ရယ်စရာကောင်းလိုက်တာ။
15:2010 pm တွင်ဇူလိုင်လ 1, 01
သူတို့က ကျွန်တော့်အဖေထက် ငယ်တယ်ဆိုတော့ ဟုတ်တယ် ပရိသတ်က ငယ်တယ်။ 🙂 သူတို့မှာ ဆိုရှယ်မီဒီယာရှေ့မှောက်မှာ တီဗီအစက်အပြောက်တွေရှိခဲ့တယ်… အဲဒါက ပိုကြီးတဲ့ ကမ်ပိန်ရဲ့တစ်စိတ်တစ်ပိုင်းဖြစ်ပုံရတဲ့ ရုပ်သံလိုင်းပေါင်းစုံ စျေးကွက်ရှာဖွေရေး ကြိုးပမ်းမှုတစ်ခု ဖြစ်နေတုန်းပါပဲ။ အထောက်အထားသည် # တွင် အမြဲရှိနေသောကြောင့် အလုပ်ဖြစ်မဖြစ် စောင့်ဆိုင်းရမည်ဖြစ်ပါသည်။ အခုက အလုပ်ဖြစ်ပုံပေါ်ပါတယ်… အဲဒါကို ရေးခိုင်းလိုက်တာ… သင်ကိုယ်တိုင်က စမတ်ကျတဲ့ မားကတ်တင်းသမားတစ်ယောက်ဖြစ်ကြောင်း သိထားတာကြောင့် ဒီပို့စ်ဟာ ဆွေးနွေးမှုများစွာကို စုဆောင်းနိုင်ပြီး လင့်ခ်ဖျော်ရည်လည်း ရရှိနိုင်မယ်ဆိုတာ သင်သိနေမယ်လို့ ထင်ပါတယ်။
15:2010 pm တွင်ဇူလိုင်လ 1, 05
Nick လည်း ဒီလိုပါပဲ။ ဒါပေမယ့် ဒီကြော်ငြာတွေမှာ ယောက်ျားလေးလိုတော့ မဖြစ်သေးပါဘူး။
15:2010 pm တွင်ဇူလိုင်လ 1, 21
ဤကမ်ပိန်းသည် ဆိုရှယ်မီဒီယာ အောင်မြင်သည်ဖြစ်စေ၊ သင့်ဆောင်းပါးတစ်ခုတည်းတွင် မှတ်ချက် 26 ခု၊ မရေမတွက်နိုင်သော (သန်းပေါင်းများစွာ) တွစ်တာများနှင့် အခြားလူမှုရေးမီဒီယာ အပြန်အလှန်တုံ့ပြန်မှုများအားလုံးသည် ဆိုရှယ်မီဒီယာစျေးကွက်ရှာဖွေရေးအောင်မြင်မှုဇာတ်လမ်းကို ညွှန်ပြနေသောကြောင့် ကွဲပြားရန်တောင်းဆိုနိုင်ပါသည်။
တိုက်ရိုက်ရောင်းချမှု တိုးလာခြင်းမရှိလျှင်ပင် စျေးကွက်သစ်တစ်ခုသို့ အမှတ်တံဆိပ်သိရှိနားလည်မှုနှင့် မိတ်ဆက်မှု တိုးလာခြင်းသည် တန်ဖိုးမရှိသည့်အပြင် နောက်လာမည့် ကြိုးပမ်းမှုများအတွက် ပလပ်ဖောင်းတစ်ခု ပံ့ပိုးပေးသည်ဟု ပြောရန်ခက်ပါသည်။
15:2010 pm တွင်ဇူလိုင်လ 1, 24
ဤကဲ့သို့သော ကမ်ပိန်းတစ်ခုတွင် အောင်မြင်မှုကို ညွှန်ပြရန် 'အချို့သောဝယ်ယူမှုများ' သို့မဟုတ် ဝယ်ယူမှုများပြားသည့်တိုင် ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုအပေါ် ပြန်အမ်းငွေ မရှိနိုင်ပါ။
15:2010 pm တွင်ဇူလိုင်လ 1, 25
Old Spice က ပိုရောင်းရမယ်ဆိုတာ လောင်းကြေးထပ်မယ် - အဲဒါက အသိတရားတစ်ခု ဖန်တီးပေးတဲ့အတွက် နောက်တစ်ခါ မင်းစတိုးဆိုင်မှာ ရောက်တဲ့အခါ ဟင်းခတ်အမွှေးအကြိုင်က 1970 ပြည့်လွန်နှစ်တွေမှာ မင်းအဖေဝတ်ခဲ့တဲ့ Old Spice နဲ့မတူဘူးဆိုတာ မင်းသတိထားမိလိမ့်မယ်။ သူတို့သည် ၎င်းတို့၏လိုင်းကို အလွန်ချဲ့ထွင်ပြီး အချို့သောအရာများသည် လုံးဝကို အံ့သြဖွယ်ကောင်းသည်။
15:2010 pm တွင်ဇူလိုင်လ 1, 39
ဒါပေမယ့် အမှတ်တံဆိပ်တစ်ခု ဒါမှမဟုတ် အသိတရားတစ်ခုရဲ့ အန္တိမပန်းတိုင်က အရောင်းပါ။
15:2010 pm တွင်ဇူလိုင်လ 1, 42
ဟိုးအရင်ကတည်းကရှိခဲ့တဲ့ ငါတို့လူကြီးတွေ ဒီလိုမျိုး ကမ်ပိန်းတွေ လာလိုက်၊ စတော့စျေးနှုန်းများနှင့် အရောင်းများ နောက်ပိုင်းတွင် ဆက်လက်ကျဆင်းသွားသည်ကို မြင်သာစေရန် ပြောင်မြောက်လှသော ကမ်ပိန်းများတွင် အိမ်ခေါင်မိုးပေါ်မှ အော်ဟစ်နေကြသည်ကို လူတိုင်းတွေ့ခဲ့ရသည်။ အဲဒါကြောင့် ဒီကမ်ပိန်းကို ဝေဖန်တယ်။ ကျွန်တော် ကိုယ်တိုင်ကိုယ်ကျ ချစ်မိပြီး ဆူညံသံတွေ ဘယ်လောက်ကြားလိုက်ရလို့ အံ့ဩမိပါတယ်… ဒါပေမယ့် ရေရှည်အကျိုးသက်ရောက်မှု ရှိဦးမလားလို့ တွေးမိပါတယ်။
15:2010 pm တွင်ဇူလိုင်လ 1, 43
ဤကမ်ပိန်းသည် အောင်မြင်သည်ဖြစ်စေ၊ မအောင်မြင်သည်ဖြစ်စေ မေးခွန်းမှလွဲ၍ အချက်အားလုံးအပေါ် သဘောတူညီခဲ့ကြသည်။
မည်သည့်ကုမ္ပဏီအတွက်မဆို slam dunk သည် အံ့သြဖွယ်စျေးကွက်ရှာဖွေရေးနှင့် အံ့သြဖွယ်ထုတ်ကုန်များရရှိရန်ဖြစ်သည်။ ဒီကမ်ပိန်းက လူတွေကို ဝယ်ယူဖို့ လှုံ့ဆော်ပေးလိမ့်မယ်ဆိုတာ သံသယရှိစရာ မလိုပါဘူး … ဒါပေမယ့် ထုတ်ကုန်တွေက “နံစော်တယ်” (ရည်ရွယ်ထားတဲ့အတိုင်း 😛 ) ဆိုရင်တော့ မားကတ်တင်းကို အပြစ်တင်လို့ မရပါဘူး။
တစ်နည်းဆိုရသော်၊ Old Spice သို့မဟုတ် Dos Equis အတွက် ကမ်ပိန်းရည်ရွယ်ချက်မှာ 'ကျွန်ုပ်၏ထုတ်ကုန်ကို စမ်းသုံးကြည့်ပါ'... မဟုတ်ဘဲ 'ကျွန်ုပ်၏ထုတ်ကုန်အတွက် တစ်သက်တာထောက်ခံသူဖြစ်လာရန်' မဟုတ်ပါ။ ယင်းနှင့်ပတ်သက်၍၊ ဤ Old Spice ကမ်ပိန်းသည် အလွန်အောင်မြင်ပါသည်။
15:2010 pm တွင်ဇူလိုင်လ 2, 28
မှန်သော်လည်း ဤအထူးအားထုတ်မှုအတွက် ပန်းတိုင်ဟုတ်ပါသလား။ ၎င်းတို့သည် Old Spice အမှတ်တံဆိပ်ကို ပြန်လည်အသက်ဝင်လာစေရန်နှင့် မျိုးဆက်သစ်လူငယ်များကို ပိုမိုဆွဲဆောင်မှုဖြစ်စေရန် ကြိုးပမ်းနေသည်မှာ အသစ်အဆန်းတစ်ခုခုကို ကြိုးစားနေကြသည်မှာ ထင်ရှားပါသည်။ အဆုံးစွန်အားဖြင့် ၎င်းသည် ရောင်းအားကို ဦးတည်စေမည်ဖြစ်သော်လည်း ဤကြိုးပမ်းအားထုတ်မှု၏ ပန်းတိုင်မှာ သို့မဟုတ် လူဟောင်းထုတ်ကုန်ဟု ထင်မြင်သည့် ကုန်ပစ္စည်းကို ပြန်လည်အမှတ်တံဆိပ်တစ်ခုအဖြစ် အသိတရားနှင့် ပြန်လည်အမှတ်တံဆိပ်ပြုလုပ်ခြင်းနှင့်ပတ်သက်၍ ပိုမိုရည်မှန်းချက်ရှိပါသလား။ ယခုတွင် ၎င်းတို့တွင် ဝင်ငွေကို တွန်းအားပေးခြင်းဖြင့် ထုတ်ကုန်ကို မြှင့်တင်ရန်နှင့် ရှေ့သို့ မြှင့်တင်ရန် ကောင်းမွန်သော ပလက်ဖောင်းတစ်ခုရှိသည်။ ဒါ အောင်မြင်မှု မဟုတ်ဘူးလား။ အဲဒါက ဆိုရှယ်မီဒီယာက တွန်းအားပေးတာမဟုတ်ဘူးလား။
16:2010 pm တွင်ဇူလိုင်လ 5, 09
မိုက်သလား။ ဟုတ်ကဲ့။ မဟုတ်ရင် Viral ဖြစ်မှာမဟုတ်ဘူး။ ဤသည်မှာ လက်တွေ့ကမ္ဘာတစ်ခုဖြစ်သည်။ Old Spice သည် ဤကဲ့သို့သော ကြော်ငြာမဟုတ်သော ဆွေးနွေးမှုများကို လှုံ့ဆော်ရန် ၎င်းတို့၏ဗိုင်းရပ်စ်လှုံ့ဆော်မှုကို စတင်လိုက်သောကြောင့်၊ ဤနေရာတွင် ကျွန်ုပ်သိသော ယောက်ျားလေးများသည် ၎င်းတို့၏ထုတ်ကုန်များ မည်မျှကောင်းမွန်ကြောင်းကို မက်မောနေကြပါသည်။ အခု ကျွန်တော် စတိုးဆိုင်ကို နောက်တစ်ကြိမ်သွားတဲ့အခါ စင်ရဲ့ Old Spice အပိုင်းကို စစ်ဆေးကြည့်ဖို့ တွန်းအားပေးနေသလို ခံစားရတယ်။ သူတို့သည် ဖောက်သည်အသစ်ကို ရရှိခဲ့သည်။
16:2010 pm တွင်ဇူလိုင်လ 5, 11
Dominoes နှင့် Old Spice တို့ကဲ့သို့ ပြန်လည်တံဆိပ်ကပ်သည့် ကမ်ပိန်းများတွင် တည်ရှိနေသည့် တကယ့်အောင်မြင်မှုဇာတ်လမ်းများသည် Adam နှင့် သဘောတူပြီး လူများပါဝင်ဆွေးနွေးရန်နှင့် အကဲဖြတ်ရန် လိုအပ်သော buzz ကို ဖန်တီးနိုင်သည်- ထို့နောက် ၎င်းတို့သည် ထုတ်ကုန်အပေါ် ၎င်းတို့၏အမြင်ကို ပြောင်းလဲသွားစေရန် မျှော်လင့်ပါသည်။ ဟုတ်ပါတယ်၊ စီးပွားရေးလုပ်ငန်းကြီးတွေရဲ့ ဆိုရှယ်မီဒီယာပလက်ဖောင်းတွေပေါ်က လုပ်ဆောင်ချက်တော်တော်များများကို တိုက်ရိုက်ဝင်ငွေပြောင်းလဲမှုတွေနဲ့ တိုင်းတာရခက်ပါတယ်၊ ဒါပေမယ့် အမှန်တကယ် ဆွဲဆောင်မှုရှိတဲ့ စကားပြောဆိုမှုကို ထုတ်ပေးတဲ့တန်ဖိုးက ကြီးမားပါတယ်။
16:2010 pm တွင်ဇူလိုင်လ 11, 58
အရမ်းမိုက်ပြီး လွယ်ရင် ဘာလို့ ဒီထက်ပိုပြီး မလုပ်ဖြစ်တာလဲ။ လူတွေက Old Spice အကြောင်း ပြောနေကြတာကြောင့် အစက်အပြောက်တွေက တောက်ပနေတာပဲ။ ကာလ။ အာမေဋိတ်အမှတ်။
သင့်အချက်သည် မှန်ကန်သော်လည်း မသက်ဆိုင်ပါ။ ၎င်းသည် မားကတ်တင်းနှင့် မိုက်မဲခြင်း၌ ထက်မြက်သည်။ BTW၊ Old Spice ကြော်ငြာများတွင် ပါဝင်သူသည် GoDaddy ထက် အနည်းငယ် စမတ်ကျသည်ဟု ကျွန်တော်ထင်ပါတယ်။
16:2010 pm တွင်ဇူလိုင်လ 1, 54
လင့်ဖျော်ရည်အရသာက ဘယ်လိုလဲ။ 😛
17:2010 pm တွင်ဇူလိုင်လ 2, 51
လူကြီးမင်းတို့၊ အရေးကြီးသော စျေးကွက်အပိုင်းကို လွဲချော်နေပါသည်။ ဤကမ်ပိန်းသည် အမျိုးသားများကို ပစ်မှတ်ထားခြင်း မဟုတ်ပါ။ အမျိုးသမီးများကို ပစ်မှတ်ထားခြင်း ဖြစ်ပါသည်။ ခင်ပွန်း၊ ရည်းစားတွေအတွက် ပစ္စည်းတွေဝယ်တယ်။ ပြီးတော့ campaign ကို ကြိုက်တယ်.. :*
26:2010 pm တွင်ဇူလိုင်လ 9, 49
အင်း... ရောင်းအားကျနေတယ် http://mkt.gs/dz3AJD
26:2010 pm တွင်ဇူလိုင်လ 11, 34
ဟုတ်ပါတယ်၊ ဒီကမ်ပိန်းက Old Spice ထုတ်ကုန်တွေကို ပိုရောင်းပါတယ်။
Neilson Co. ၏ အဆိုအရ 11 ပတ်အတွင်း ရောင်းအားသည် 52% တက်လာပြီး လွန်ခဲ့သည့် သုံးလအတွင်း ရောင်းအား 55 ရာခိုင်နှုန်း ခုန်တက်သွားပြီး လွန်ခဲ့သည့်လတွင် 107 ရာခိုင်နှုန်း တက်လာခဲ့သည်။ http://bit.ly/brandweek-old-spice (အပတ်စဉ် ဇူလိုင် ၂၅၊ ၂၀၁၀)
အနီရောင်ဇုန်အတွက် ရောင်းအားသည် ဇူလိုင် ၁၁ ရက်က ကုန်ဆုံးခဲ့သည့် လေးပတ်တာကာလအတွက် ကန်ဒေါ်လာ ၁.၆ သန်းအထိ ရောက်ရှိခဲ့ပြီး ဖေဖော်ဝါရီ ၂၁ ရက် ကုန်ဆုံးသည့် လေးပတ်တာကာလအတွင်း ၄၉ ရာခိုင်နှုန်း ခုန်တက်သွားခဲ့ကြောင်း SymphonyIRI ၏ အချက်အလက်ဖော်ပြချက်အရ သိရသည်။ အခြား Old Spice Body Wash ထုတ်ကုန်လေးမျိုးကိုလည်း လွှင့်တင်ထားသည်။ Old Spice Body Wash ၏ ယေဘုယျရောင်းအားသည် ထိုကာလအတွက် 1.6 ရာခိုင်နှုန်း မြင့်တက်ခဲ့သည်။
ဒီကိန်းဂဏာန်းတွေ မှန်နေတယ်ဆိုရင် ဒါဟာ ကျွန်တော့်အတွက် အံ့သြစရာကောင်းတဲ့ အောင်မြင်မှုတစ်ခုပါပဲ။
2010 မတိုင်မီ “Old Spice = Old Man Gross!”
Post 2010 "Old Spice = မြင်းပေါ်မှလူ" လူတိုင်းပြောနေကြပြီး လူမှုကွန်ယက်များမှတဆင့် မျှဝေသည်"